China Oil flling igwe akara factory na suppliers | Higee
Igwe a na-ejuputa ihe a bụ maka ijuputa mmiri dị elu ma ọ bụ ihe dị ka mmanụ, jam wdg. Nke a bụ akara ntinye ederede, nke nwere ike ijikọta ya na tebụl nri, igwe na-ejuputa, igwe ihe ntinye, onye nbipute ụbọchị, igwe akara dị ka otu akara zuru ezu.
Mmanụ na-ejuputa Capping Machine Linear Line
1.Amị na-ejuputa mmanụ
Mmanụ, ude, jam, nchacha, na ihe ndị ọzọ nwere viscous na ihe ọ beụverageụ, nri, kemịkal, ọgwụ na-egbu ahụhụ, ọgwụ, ngwaahịa na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Vol Nke ziri ezi: A na-etinye usoro servo iji hụ oke ziri ezi nke olu juputara.
Speed ​​Ọsọ Na-agbanwe: Oge njuju ga-adị nwayọ nwayọ mgbe ọ na-abịaru olu a chọrọ.
Illing Na-ejuputa Ngwunye: Na-ejuputa nozzles ga-abanye na mmiri mmiri mgbe ị na-ejuputa iji zere ịfụfụ na ịwụfu.
Ndozi nke ọgụgụ isi: Naanị ị ga-agbanwe parameters na ihuenyo mmetụ maka njupụta dị iche iche ma ọ bụ ọbụlagodi nke ọma. Isi niile na-ejuputa nwere ike gbanwee. Ọ nwere onye ọrụ-enyi na enyi interface na bụ n'ezie mfe iji rụọ ọrụ.
Free Mmetọ na-enweghị mmetọ: Isi igwe akụrụngwa bụ nke igwe anaghị agba nchara 304 nwere ezigbo mmetụta na-emebi emebi. All ịkpọtụrụ akụkụ ka nke igwe anaghị agba nchara 316L. A na-emechi igwe niile na igwe anaghị agba nchara na iko siri ike ka ewe gbochie ihi mmiri gas.
2.Automatic na-agbagọ Capping Machine
A na-ejikarị ụdị ihe igwe eji eme ihe maka nkedo nke karama, square, ma ọ bụ mpempe akwụkwọ nwere mkpuchi.
3.Automatic ihennyapade Labeling Machine
A na-eji ụdị igwe akụrụngwa a eme ihe maka ịkọ aha karama gburugburu na akwụkwọ mmado. PLC na-achịkwa ya ma na-eduzi ya. The ọrụ na onye-enyi na enyi interface na-eme ka ọ nnọọ mfe na-arụ ọrụ.
1. Usoro nnwere onwe nke electromechanical na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ntụgharị na ntinye aha, si otú a na-emeziwanye akara nyocha.
2. Enwere nkuzi na igwe na-egosi ka ihe nkiri eserese ahụ si agbakọta ka ịgbanwee ihe nkiri ahụ dị mfe.
Nke gara aga: Pasteurizer & Sterilizer
Osote: Mkpa igwe na-ejuputa mmanụ